မရဏတံခါးကို ကိုင်လှုပ်ခြင်း | Storming the Gates of Hell! | Real Conversion
ဇူလိုင်လ ( ၈ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်
သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ မဿဲ ၁၆း ၁၈၊ ကျမ်းပိုဒ်၏ဒုတိယအပိုင်းကို ကြည့်ကြပါစို့။ ယင်း သည် Scofield Study ကျမ်းစာအုပ်၌ စာမျက်နှာ ၁၀၂၁ တွင် တွေ့ရသည်။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုသည်။
“ဤကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့အသင်းကို ငါတည်ဆောက်မည်။ ထိုအသင်း ကို မရဏာနိုင်ငံ၏တံခါးတို့သည် မနိုင်ရာ။” ( မဿဲ ၁၆း ၁၈ခ)
အနက်ဖွင့်ကျမ်းရေးသားသူ R. C. H. Lenski က “ရှုပ်ထွေးသောအရာမှာ မရဏတံခါးသည် ခရစ်တော်၏အသင်းတော်ကို တိုက်ခိုက်ရန် ၎င်း၏ဗိုလ်ခြေ ( နတ်ဆိုး ) များကို စေလွှတ်သော် လည်း အသင်းတော်ကိုမနိုင်ရာ” ဟုဆိုသည်။ (Lenski, မဿဲ ၁၆း ၁၈ခ မှတ်စု ) ဆိုလိုသည် မှာ နောက်ဆုံးသောကာလက မှားယွင်းသောအသင်းတော်များကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်၊ စစ်မှန် သောအသင်းတော်ကို ရည်ညွှန်းထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ မှားယွင်းသောအသင်းတော်သည် နတ်ဆိုး၏ဖျက်ဆီးခြင်းကို နေရာအနှံ့ခံရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤအကြောင်းကို ကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်ထားသည်။
“ဝိညာဉ်တော်သည် အတိအလင်းဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကား၊ နောင်ကာလ၌ ဩတ္တပစိတ်တွင် သံပူနှင့်ခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင် မု သာစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့၏ လှို့ဝှက်ခြင်းအားဖြင့်၊ လူအ ချို့တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍။” ( ၁ တိ ၄း ၁ )
စာတန်နှင့်နတ်ဆိုးအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်ပေးထားသော သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ချထား သည့် “ယုံကြည်ခြင်းမှထွက်ခွါရန်” အသင်းတော်ကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ဖြားယောင်းသည်။
ယင်းတို့လုပ်ဆောင်ချက်များက အသင်းသားအများစုက ပျော်ရွှင်မှုနောက်သို့လိုက် ၂ တိမောသေ ၃း ၁-၈ ၌ ဖော်ပြထားသည်အတိုင်း “နောက်ဆုံးသောကာလ” အသင်းတော်များ ကို ဖြစ်စေသည်။
“ဘုရားသခင်ကိုနှစ်သက်သည်ထက် ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကို သာ၍ နှစ်သက်သောသူ၊ ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်ယောင်ဆောင်၍၊ မွေ့ လျော်ခြင်းတန်ခိုးကို ငြင်းပယ်သောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုသူတို့ ကို ရှောင်လော့။” ( ၂ တိ ၃း ၄၊ ၅ )
ထို့ကြောင့်၊ ယနေ့ကာလတွင် မှားယွင်းသောအသင်းတော်၊ နှင့်မှန်ကန်သောအသင်း တော်ဟူ၍ အသင်းတော်နှစ်မျိုးရှိကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါ သည်။ မှန်ကန်သောအသင်းတော်ကိုသာ ယေရှုပေးတော်မူသောကတိတော်မှာ အောက်ပါအ တိုင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ မှားယွင်းသောအသင်းတော်များက ဝိုင်း ရံလျက်ရှီသည်။ မှားယွင်းသောအသင်းတော်များမှာ လောဒိကိကဲ့သို့သောအသင်းတော်မျိုး ဖြစ်ကြပြီး ယင်းကို Scofield မှတ်စုက “မှားယွင်းသောအရာများ၏နောက်ဆုံးသောအခြေအ နေ” ဟု သမုတ်ထားသည်။ ယနေ့အသင်းတော်များစွာတွင်ရှိသည့် လောဒိကိမှားယွင်းမှုများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
“သင်ကလည်း၊ ငါသည် ဥစ္စာရတတ်၏။ ဘဏ္ဍာများကို ဆည်းပူးပြီ။ တစုံတခုကိုမျှမလိုဟု ပြောဆို၍ ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်း၊ သနား ဘွယ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ မျက်စိကန်းခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ရှိခြင်းဖြစ်သည်ကို မသိပါတကား။” ( ဗျာဒိတ် ၃း ၁၇ )
“ထိုသို့အဧမဟုတ်၊ အပူမဟုတ်၊ နွေးရုံရှိသောကြောင့် ငါ၏ခံတွင်း သည် သင့်ကိုထွေးလုပြီ။” ( ဗျာဒိတ် ၃း ၁၆ )
နောက်ဆုံးသောကာလများ၌ရှိသော ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များ၏ အဓိကကျသော နတ်ဆိုးသွန်သင်မှုကိုနားထောင်ခြင်း ( ၁ တိ ၄း ၁ ) နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အပြင် ပန်းပုံ သဏ္ဍာန်ဆောင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု မှားယွင်းသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအ ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာ John MacArthur က မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုသည်မှာ မပူမ အေး၊ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်သောသူ၊ ခရစ်တော်ကိုသိယောင်ဆောင်သော်လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိ။ မိမိကိုယ်ကိုလှည့်ဖြားအယောင်ဆောင်သောသူသည် ခရစ်တော်ကို ( ချဉ် စေသည် ) ဟုဆိုသည်။ ဒေါက်တာ MacArthur သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့်ပတ်သက် ပြီး ခံယူချက်အမှားအယွင်းလေးများရှိနေပါလျက် ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်များကို “မိမိကိုယ်ကို လှည့်ဖြားဟန်ဆောင်သူများ” အဖြစ် ဖော်ပြရာတွင် လုံးဝမှန်ကန်မှုရှိပါသည်။
ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များက ၎င်းတို့၏လူငယ်လူရွယ်များကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်မှာ ထိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ John S. Dickerson က ဧဝံဂေလိအသင်းတော် များ၏ကြီးမားသောဆုတ်ယုတ်ခြင်းဟူသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသားခဲ့ပါသည်။ (Baker Books) သူက မှန်ကန်သောနည်းဗျူဟာများကို ချမှတ်ပေးထားသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် လူငယ်များအထဲက ၇ ရာခိုင်နှုန်းကသာ မိမိကိုယ်မိမိ ခရစ်ယာန်ဟု ကြွေးကြော်နိုင်ကြသည်။ ဧဝံဂေလိအသင်းတော်လူငယ်များသည် လူငယ်များကို ပြန်လည်မွေးထုတ်ပေးနိုင်မေးလျှင် ၇ ရာခိုင်နှုန်းကနေ “၄ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ထိုထက် လျော့နည်းသောရာခိုင်နှုန်းအထိ ထိုးကျသွားနိုင်သည်။” (Dickerson, စာ-၁၄၄ )
ထိုသို့ကြီးမားသည့်အရေအတွက်သည် အသင်းတော်တွင် အဘယ့်ကြောင့် ပျောက် ဆုံးနေရသည်နည်း။ အဓိကသော့ချက်မှာ သူတို့သည် John MacArthur သကဲ့သို့ “မိမိကိုယ် ကိုယ်လှည့်ဖြားသည့် အယောင်ဆောင်များဖြစ်သည်ကို အသင်းတော်အများစုက မြင်တွေ့ကြ ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့က ကြာမြင်သော့အသင်းတော်ဝင်များကို မိမိပတ်လည်တွင် ရှိသောအပြစ်ကမ္ဘာနှင့်ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသည့် ပျော့ညံ့သော၊ အားနည်းသော၊ တန်ခိုးမရှိသော သူများအဖြစ်မြင်တတ်ကြသည်။ ဒေါက်တာ David F. Wells ကလည်း ထိုသို့မြင်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့်သူရေးသားသည်မှာ “သမ္မာတရားတည်ရာမရှိ၊ သို့မဟုတ် ဧဝံဂေလိဓမ္မပညာတွင်ဖြစ် ပျက်သောအရာ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (Eerdmans, ၁၉၉၃ ) နာမည်ကြီးဆရာ ဒေါက်တာ Carl F. H. Henry က လည်း ထိုအတိုင်းမြင်သဖြင့် ဤသို့ဆိုပါသည်။
“မျိုးဆက်များသည် မျိုးဆက်များအကြောင်း ( အသစ်မွေးဖွါးခြင်း ) အ ကြောင်းကို အလေးထားစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ ကြီးထွားလာသည်။ လူရိုင်းများသည် ပျက်စီးနေသောပြည်၏ဖုံမှုန့်ထဲတွင် ရုန်းကန်နေ ကြသည်။ မစွမ်းနိုင်သောအသင်းတော်၏အရိပ်အောက်တွင်ရှိနေ ကြပါသည်။” (Twilight ofaGreat Civilization, Crossway Books, စာ- ၁၅-၁၇ )
“မစွမ်းဆောင်နိုင်သောအသင်းတော်” ထိုအကြောင်းကြောင့် ဒေါက်တာ Carl F. H. Henry က ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များကို “မစွမ်းသောအသင်းတော်တစ်ခု” ဟု သမုတ်လိုက်သည်။ တရားဟောဆရာကြီး ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones က “နောက်ဆုံးနှစ်တစ်ရာအတွင်း၌ အသင်းတော်ကို ဖော်ပြသည့် ကြောက်မက်ဖွယ်ယုံကြည်မှားယွင်းမှု” အကြောင်းကို ပြောပါ သည်။ ( နိုးထမှု၊ Crossway Books, စာ-၅၇ )
ကျွန်တော်တို့သည် အသင်းတော်ရှိ လူငယ်များစွာကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ “တပည့်တော်သစ်များမွေးထုတ်ရန်“ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ဒေါက်တာ Wells က “ဧဝံဂေလိ ( အသင်းတော်များ ) သည် ၎င်းတို့၏အရင်းမြစ်များကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ဧဝံဂေလိ အသင်းတော်များသည် ပျော့ပျောင်းကြသည်။ အားနည်းကြသည်။ တကိုယ်ကောင်းဆန်ကြ သည်။ ရှေးကျသောတပည့်တော်များကို ပြောဆိုရန် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုရန် ကြောက်ရွံ့နေ ကြသည်။ လူငယ်များကို စိတ်မဝင်စားကြသည်မှာ အံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပါ။
ဤနေရာမှာ ငါတို့ရှိနေခြင်းက သင်တို့ကို အားနည်းစေဖို့၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်သည့် ဧဝံဂေလိအဖွဲ့တစ်ခုအနေဖြင့် ရှိနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်၏စစ်မှန်သောတပည့်တော်ဖြစ် လာစေရန် ခေါ်ဖို့ရှိနေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်တစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်းသည် ကျွန်တော် တို့၏ပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ပန်းတိုင်မှာ ခရစ်တော်နှင့်သူ၏နိုင်ငံတော်၌ ရွှေ တံဆိတ်ကို ဆွတ်ခူးရရှိသည့်လူငယ်များအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရွေး ကောက်ခြင်းခံရသောလူငယ်တို့သည် ခုခံတိုက်ခိုက်သောခရစ်ယာန်ဘာသာစိန်ခေါ်မှုအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေရမည်။ ကယ်လ်ဗင်းဝါဒခရစ်ယာန်ဘာသာ၏စိန်ခေါ်မှုအတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သောသူသည် မိမိကိုယ်ကို အားနည်းနေစေသည်။ ယေရှုက “ခေါ်တော်မူသောသူအများ ရှိသော်လည်း ရွေးကောက်သောသူနည်း၏” ဟု မိန့်တော်မူသောစကားကို သတိရပါ။
ဧဝံဂေလိအရှိန်ကိုလျော့ချဖို့ အချိန်မဟုတ်ပါ။ မနေ့ညက ညနေစာအတူစားပြီး ဤအ သင်းတော်၌ “ခရစ်တော်၏တမန်တော်၊ ပေါလု“ အကြောင်းကြည့်ရှုကြသည်။ “ခရစ်တော်၏ တမန်တော်၊ ပေါလု” က ခရစ်တော်၏တပည့်တော်အစစ်ဖြစ်ကြောင်းကို ပြသရန် ပထမရာစု တွင် အခက်အခဲနှင့်ဒုက္ခပြဿနာအလုံးစုံကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် အခြား လူငယ်များလည်း ခရစ်တော်၏တပည့်များဖြစ်လာကြစေရန် ဧဝံဂေလိသွားကြမည်။ ခရစ် တော်၏စကားကို နာခံလိုက်လျှောက်လျှင် အဘယ်မျှလောက်ကြီးမားသောအချိန်ကာလကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါလိမ့်။ ခရစ်တော်က “သင်တို့သည် လမ်းကြိုလမ်းကြားသို့သွား၍ လာကြရန် လူတို့ကို အနိုင်အထက်ပြုကြလော့” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်မှကယ်နှုတ်ရန် သွေးစွန်းသောသစ်တိုင်ပေါ်မှာ အသေခံခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ခန္ဒာကိုယ်၊ အသွေးအသားဖြင့် ကျွန်တော်တို့အားအသက်ပေးရန် ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။
ယေရှုသည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကို သိသည်။ ထိုအကြောင်းကို ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့တစ်နေ့တည်း၌သာမဟုတ်။ နေ့ရက်စဉ်တိုင်းသိသည်။ အိပ်ပျော်သည့် ညများတွင်လည်း သတိရသည်။ နံနက်ခင်းချိန်ခါနှင့်တစ်နေ့လည်းသိသည်။ “သူသည် ဤအ ရပ်၌ ရှိသည်မဟုတ်၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပြီ။” ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်က ထိုသို့ဆိုသောကြောင့် ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကို သိပါသည်။ ဤအဖိုးကြီး၏နှုတ်အားဖြင့် ဒီမနက်တွင် သင့်ထံသို့ရောက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူသည် သင့်ထံသို့လာသည်။ သူက “ငါသည် ထာဝရအသက်ရှင်သည်” ဟုဆိုသည်။ ခရစ် တော်သည် အသက်ရှင်တော်မူသည်ဖြစ်၍ အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ကျွန်တော် သိသည်။ သူသည် အသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍ ကျွန်တော်လည်း အသက်ရှင်နိုင်သည်။ သူသည် ထာဝရအသက်ရှင်သောကြောင့် သင်သည်လည်း ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ထာဝရအသက်ရှင် နိုင်သည်။ ခရစ်တော်၏တပည့်တော်များအတွက် အဆုံးသတ်ဟူ၍မရှိ။ လာပြီး ယေရှုခရစ်နှင့် အတူ ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော လင်းလက်သည့်မနက်ဖြန်ဆီသို့ သွားကြပါစို့။ သူ သည် သင့်အား ကျဆုံးစေမည်မဟုတ်။ ယခုလာ၍ ဤအသင်းတော်ကို စစ်တပ်၊ ခရစ်တော် နှင့်သူ့နိုင်ငံတော်၏တန်ခိုးကြီးသောစစ်တပ်အဖြစ် တည်ဆောက်ကြပါစို့။
Rev. John Cagan သည် အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးသည်။ သူသည် ယေရှု ၏တပည့်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ကားတိုင်တော်စစ်သားဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသ ခင်၏နိုင်ငံတော်၌ ရွှေဆွဲပြား ဆွတ်ခူးမည့်သူဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ည ၆း ၁၅ တွင် သူဟောပြော မည့် တရားဒေသနာကို ဖတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဖတ်ဖူးသမျှတရားဒေသနာထဲတွင် ခွန်အား အရဆုံး သော တရားဒေသနာဖြစ်ပါသည်။ လာပါ။ သင်းအုပ်ဆရာ John နှင့်အတူ လာ၍ ခွန်အားယူ ကြပါစို့။ ထို့အပြင် ဤအသင်းတော်ကိုလည်း ဘုရားသခင်၏မီးပြတိုက်အဖြစ်တည်စေကြပါစို့။ စာတန်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သောစစ်တပ်အဖြစ်လည်း တည်ဆောက်ကြပါစို့။
ထပါ၊ ဘုရားသခင်၏လူတို့၊ အနည်းငယ်သောအမှုသာ လုပ်ဆောင်ကြလား၊
စိတ်နှလုံး၊ ကိုယ်ခန္ဒာစွမ်းအားအကုန်ပေး၊ ဘုရင်တို့အရှင်ကို အစေခံလိုသောဌါ။
ထပါ၊ ဘုရားသခင်၏လူတို့၊ အသင်းတော်သည် သင့်အား စောင့်မျှော်နေ၊
သူ့ခွန်အား သူ့တာဝန်မလိုက်ဘက်၊ ထလော့၊ သူ့အား ကြီးမြတ်စေပါ။
( “ထလော့၊ ဘုရားလူတို့” William P. Merrill, ၁၈၆၇-၁၉၅၄၊
သင်းအုပ်က ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်။ )
သင်တို့သီချင်းစာရွက်၌ နံပါတ် ၁ ကို အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီဆိုကြပါစို့။
ကျွန်တော်တို့သည် ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များသည် လောဒိကိအသင်းတော်ကဲ့သို့ အားနည်းပြီး မှားယွင်းနေသည့်အချိန်ကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သူတို့က လူငယ်အားလုံးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်မှာလည်း အမှန်ပင်။ သူတို့သည် ၎င်းတို့နှင့်ပူး ပေါင်းဖို့ အခြားလူငယ်များကိုလည်း တိုက်တွန်းခွန်အားပေးနိုင်စွမ်းမရှိကြပါ။ သူတို့သည် အ လွန်ပျော့ပျောင်းကြသည်။ ရင့်ကျက်မှုမရှိကြပါ။ စိတ်ဝင်စားမှုလည်းနည်းကြပါသေးသည်။ ကျွန်တော်က သင်တို့အရွယ်လောက်ကဆို သူတို့က ဘယ်လို “ကျောခိုင်းသွားကြသည်” ကို မှတ်မိနေသေးသည်။ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သည်။ သို့သော် ထိုတိုက်ခိုက်မှုသည် သန့် ရှင်းသောတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည်။ မာတင်လုသာကဲ့သို့သော တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည်။ အခြားသော သူများသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို မေ့လျော့နေကြသည်။ သူတို့အိပ်ပျော်ပါလေစေ။ ကျွန်တော် တို့အသင်းတော်၌ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအသစ်လေးစတင်ဖို့ လာရောက်ကူညီပေးပါ။ ယခု ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုပါ။ မနက်ဖြန်အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပါ။ ထာဝရအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလေး ပါ။
ကျွန်တော်တို့သည် လောဒိကိမှားယွင်းမှုအလယ်တွင် ဖိလဒီဖီလားကဲ့သို့သောအ သင်းတော်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသလား။ ဖိလဒေဖိလရှိအသင်းတော်ကို ခရစ်တော်က ဤသို့ဆိုပါ သည်။
“အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်သောတံခါးကို သင့်ရှေ့၌ ငါဖွင့်ထားပြီ။ အ ကြောင်းမူကား၊ သင်သည် အနည်းငယ်သောခွန်အားရှိသည်နှင့်၊ ငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီ။” ( ဗျာဒိတ် ၃း ၈ )
ခရစ်တော်၏တပည့်တော်အတွက် လူငယ်အရင်းအမြစ်နှင့်ပြည့်၀သောအသင်းတော်တစ်ပါး ဖြစ်နိုင်ကြပါရဲ့လား။ ပေးဆပ်ရတာချည်းပါပဲ။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုသာဆိုနေနိုင်သည်။ သမ္မတ မိန့်ခွန်းစာစောင်ရေးသားလေ့ရှိသူ Patrick J. Buchanan က “ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေသည့်တစ်ခု တည်းသောနည်းလမ်းမှာ ထိုက်တန်သောတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ ပြန်လာပြီး ညနေ ၆း၁၅ တွင် အတူတကွ ညနေစာ သုံးဆောင်ကြပါစို့။ ယနေ့ည ပြန်လာပါ။ သင်းအုပ် ဆရာ John Cagan က တိုက်ပွဲပါဝင်ဆင်နွှဲရန် တိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါမည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် ဆုံးရှုံးသောအရာမဟုတ်ပေ။ ဆုံးရှုံးမှုတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အောင်မြင်မှုကလည်း အသေအချာပါပဲ။ ခရစ်တော်က “ဤကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့အသင်းတော်ကို ငါတည်ဆောက်မည်။ ထိုအသင်းကို မရဏာနိုင်ငံ၏တံခါးတို့သည် မနိုင်ရာ” ဟု မိန့်တော်မူ သည်။ “မရဏာတံခါးတို့သည် မနိုင်ရာ။” မရဏာတံခါးဟူသည် သေခြင်းတံခါးဖြစ်ပါသည်။ သေခြင်းတံခါးက ကျွန်တော်တို့ကို မရပ်တန့်နိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့ ကိုးကွယ်သောသခင်သည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့ပြီ။ အကြောင်းမှာ သူသည် အသက် ရှင်သည်ဖြစ်၍ “မရဏာတံခါး” သည် ကျွန်တော်တို့ကို မအောင်မြင်နိုင်ရာ။ အာမင်။ ယနေ့ည ၆း ၁၅ အချိန်တွင် ပြန်လာကြပါ။ မရဏာတံခါးသည် ငါတို့ကို မအောင်န်ိုင်ရာ။
ဤစိန်ခေါ်မှုများကို ဒေါက်တာ Francis A. Schaeffer ၏စကားဖြင့် အဆုံးသတ်ချင် ပါသည်။ ဒေါက်တာ Schaeffer သည် ဓမ္မပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလက ဆိုလျှင် စစ်မှန်သောပရောဖက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သူက “ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များ သည် အသက်ရှင်သောခရစ်တော်အပေါ်သစ္စာမရှိဘဲ လောကအရာကိုသာ ဦးစားပေးသော အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ကို ငါစိန်ခေါ်တယ်။ ခရစ်ယာန်အရင်းအမြစ်အတွက် ငါအ လိုရှိတယ်၊ အထူးသဖြင့် လူငယ်ခရစ်ယာန်အရင်းအဖြစ်သည် မှားယွင်းသောအရာနှင့်ရှုပ် ထွေးပြီး အသင်းတော်၌ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲရာ ပြိုကွဲကြောင်းအတွက်ရပ်တည်ပေးမည့် အရင်းအမြစ်များကို အလိုရှိတယ်” ဟုဆိသည်။ ( ကြီး မားသည့် ဧဝံဂေလိအပျက်အစီးများ၊ စာ- ၃၈၊ ၁၅၁ )
အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး ဓမ္မသီချင်းနံပါတ် ၂ ကို သီဆိုကြပါစို့။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မာတင်လုသာ၏သီချင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျယ်လောင်နိုင်သမျှကျယ်အောင် သီဆိုကြ ပါစို့။
အကျွန်ုပ်တို့ဘုရား ခိုလှုံရာရဲတိုက်၊ ဘယ်တော့မှ မပြိုလဲပါ၊
ကူမသောသူ၊ ပျက်စီးခြင်းတရားလွှမ်းမိုးသော ပင်လယ်လှိုင်းကြမ်းထဲမှာ
အကျွန်ုပ်တို့အသက်ကို ရန်သူနတ်ဆိုး ရှာဖွေရန်ကြိုးစား
ဤအမ္ဘာမြေကြီး နတ်ဆိုးနှင့်ပြည့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ရန်လိုမှုနှင့်ဆက်ဆံ၊
နှုတ်တော်ဖြင့် အောင်မြင်ရန် ကိုယ်တော်အလိုရှိသောကြောင့် အလျဉ်းမစိုးရိမ်၊
မှောင်မိုက်အစိုးရသူ၊ အသင်အား မကြောက်ရွံ့ပါ။
သင့်ရဲ့ခြောက်ချားမှု သည်းခံနိုင်၊ သင့်ကံကြမ္မာစောင့်လျက်ကြို
ပိန္ဒုစကားတစ်ခွန်း သူ့ကို အနိုင်ယူသွား
ထိုစကားတစ်ခွန်း ကမ္ဘာစွမ်းအားထက်ကြီးမား၊ သူတို့ကို ကျေးဇူးမတင်၊ မတည်နေ
ဝိညာဉ်နှင့်ဆုကျေးဇူးများ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌တည်နေသည်။
စည်းစိမ်နှင့်ဆွေမျိုးများစွန့်သွား၊ ယာယီခဏ အသက်တာပင်
ခန္ဒာကိုသတ်နိုင်သော်လည်း၊ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော် တည်လျက်နေ၏။
( “ဘုရားသခင်ခိုလှုံရာရဲတိုက်” ၊ Martin Luther, ၁၄၈၃-၁၅၄၆ )
သင်းအုပ် John ရေ၊ ကျေးဇူးပြုပြီးဆုတောင်းဦးဆောက်ပါ၊ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ အစားအ သောက်အတွက်လည်း ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးပါ။
“ဘုရားသခင်သည် ခိုလှိုရာရဲတိုက်ဖြစ်သည်ကျူး” ( မာတင်လုသာ ,၁၄၈၃-၁၅၄၆ ရေးစပ်သည်။ )